Black Friday ngoku iyafumaneka kwi Amazon kwiimveliso Apple | Ndisuka kuMac
NgoLwesihlanu oMnyama ngoku iyafumaneka kwiAmazon kwiimveliso zeApple
Xa nangoku kushiyeke iveki enye phambi komsitho weBlack Friday, ukuba le spout iwela ngoNovemba 26, iintsuku eziliqela singakwazi ukufumana izibonelelo ezinomdla kwiimveliso ze-Apple kwi-Amazon.
Okulandelayo, ndikushiyela ezona zinikezelo zinomdla ezikhoyo namhlanje Iimveliso zeapile kunye nezixhobo, inikezela ukuba, xa iiyunithi zithengisiwe, aziyi kuphinda zifumaneke, ngoko akufanele ucinge kabini.
1 Uthotho lweApple lwe-6 44 mm yee-euro ezingama-349
2 I-Sandisk 1 TB ephathekayo ye-SSD ye-119, i-euro
3 Ibhetri yeMagSafe ye-iPhone 12 yee-euro ezingama-90,19
4 I-Smart Folio Case ye-iPad 12,9 intshi
5 Satechi 3-in-1 isiseko sokutshaja kwi-65,99 euro
6 I-Belkin 3-in-1 itshaja engenazingcingo yee-euro ezingama-69,9
7 I-Belkin Hi-Fi + isithethi esihlakaniphile kunye netshaja engenazingcingo ye-97,49 euros
Uthotho lweApple lwe-6 44 mm yee-euro ezingama-349
Uthotho lweApple 6 ...
I-Apple Watch Series 6 ayinanto yokumonela iSeries 7, ngaphandle kobukhulu besikrini, ukonyuka okungafanelanga ukuba ungafumana iSeries 6 enezaphulelo ezinomdla ezifana nale sikubonisa yona apha.
I-Apple Watch Series 6 enecala le-44mm kunye ne-GPS Iyafumaneka kwiAmazon nge-349 euro.
Thenga i-Apple Watch Series 6 44 mm kwiMveliso RED umbala we-349 euros e-Amazon.
I-Sandisk 1 TB ephathekayo ye-SSD ye-119, i-euro
ISanDisk Extreme SSD ...
Ukwandisa indawo yokugcina iMacBook ngaphandle kokuncama isantya sodluliselo yimpepho eneSandisk 1TB SSD ekhoyo. nge-119,99 euro, ngesaphulelo se-37%.
Thenga iSandisk SSD 1 TB ye119,99 euros kwiAmazon.
Ibhetri yeMagSafe ye-iPhone 12 yee-euro ezingama-90,19
I-Apple MagSafe Ibhetri ...
Yandisa umthamo webhetri ye-iPhone 12 yakho, i-iPhone 12 Pro, i-iPhone 12 Pro MAx, kunye ne-iPhone 12 mini nge-MagSafe Battery, ibhetri enayo. Ifumaneka kwiAmazon nge-90,19 euros.
Thenga ibhetri yeMagSafe ye-iPhone 12, i-iPhone 12 Pro kunye ne-iPhone 12 Pro Max ngee-euro ezingama-90,19 eAmazon.
I-Smart Folio Case ye-iPad 12,9 intshi
Ityala le-Apple Smart Folio ...
I-Smart Folio Case yesizukulwana sesi-12,9 i-5-intshi ye-iPad Pro ifumaneka kwi-Amazon nge-95,99 euro, xa ixabiso laso eliqhelekileyo li-109 euro.
Thenga i-Smart Folio case ye-iPad 12,9 intshi ye-95,99 euros.
Satechi 3-in-1 isiseko sokutshaja kwi-65,99 euro
Itshaja yeSatechi Trio...
I-Satechi isinika isiseko sokutshaja esikwasivumela ukuba sibize i-iPhone, i-Apple Watch kunye ne-AirPods ngee-euro ezingama-65,99 kuphela, nge-34% isaphulelo.
Thenga iSatechi 3 kwisiseko sokutshaja esi-1 nge65,99 euros.
I-Belkin 3-in-1 itshaja engenazingcingo yee-euro ezingama-69,9
Belkin - Itshaja ...
NgeBelkin 3-in-1 yokuTjaja idokhi, ungahlawulisa i-Apple Watch yakho, i-AirPdos, kunye ne-iPhone ngee-euro ezingama-69,99 kuphela, xa ixabiso layo eliqhelekileyo liyi-119,99 euros, eyi-42% isaphulelo.
Thenga iBelkin 3-in-1 isiseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo nge69,99 euros.
I-Belkin Hi-Fi + isithethi esihlakaniphile kunye netshaja engenazingcingo ye-97,49 euros
Isithethi esihlakaniphile saseBelkin siyahambelana ne-AirPlay 2, ibandakanya isiseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo, inebluetooth, iyahambelana ne-Alexa ... kwaye Iyafumaneka kwiAmazon nge-97,49 euro, emele i-68% isaphulelo kwixabiso layo eliqhelekileyo, eliyi-299 euro.
Thenga iBelkin smart speaker kunye nesiseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo nge97,49 euros.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » NgoLwesihlanu oMnyama ngoku iyafumaneka kwiAmazon kwiimveliso zeApple
Imoto yeApple inokufika ngonyaka ka-2025
I-SharePlay iya kufika kwiiMacs phambi kokuphela konyaka